Akhriso: Dhibaatada Caafimaad Oo Ay Leedahay Tubaakada – Goobjoog News
Akhriso: Dhibaatada Caafimaad Oo Ay Leedahay Tubaakada
Tubaakadu waa nooc ka mid ah maan dooriyaha kuwooda ugu qatarta badan Sida ay Sheegeen Saynas-yahannada Caafimaadka wax-yeellana u geysata caafimaadka qofka taas oo dhinaca kalana isticmaalah kala dagaalanta dhaqaalaha,Caafimaadka iyo Quruxda ilkaha.
Dunida oo dhan waxa ay isku raacsantahay qatarta Tubaakadu u leedahay dadka Cuna iyo kuwa lagu ag isticmaallo sidaas oo ay tahayna weli waxaa tubaakadda laga isticmaalaa meelo badan oo caalamka ka mid ah waxaana ugu badan dalalka dunidda saddexaad.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka tubaakada sida xad dhaafka ah ah looga isticmaalo nuucyadeeda kala duwan,mana jirto dadaal muuqda oo wax looga qabanayo beerista, iibinta iyo isticmaalkeeda.
Iyadoo culeyska iyo qatarta tubaakadda ay meelkasta oo dunida ka mid ah taallo ayaa haddana sanad kasta waxaa loo Asteeyaa maalin gaar ah oo lagu Muujiyo Qatarta Dunida ayku leedahay, waxaana dadka laga wacyi galiyaa in ay ka fogaadan nuucyada tubaakada oo isugu jirta Cabid, Saarashada afka iyo qeyba kale sida in Sanka laga dhuuqo.
Nuur Hantiile oo horay u isticmaali jiray maan dooriyaha Tubaakadu ayku jirto haddase aan isticmaalin muddo dheer ayaa ka sheekeynaya Farqiga u dhexeeya Xilligii uu cuni Jiray tobaakadda iyo Waqtigan waxaa uuna yiri.
“ Aniga oo aan aqoonin dhibaatada ay leedahay Tobaakadu ayuu aabahay dhihi jiray iska ilaaliya Tobaakada, ka dib waxaan bilaabay in aan cuno Tobaakada, ka dib waxaan ogaaday waxa aan ku dhexjiro in aysan aheyn wax wanaagsan, xitaa cunisteeda haddaad dadka kala dhuumto adoo urayo ayaad imaanee”.
Tubaakada shaqsiga isticmaala waxa ay ka dhigtaa in uu noqdo calooshiis u shaqesyte ka fekera oo keliya halka uu ka heli karo Tubaakada iyo sida uu ku heli karo maadaama uu qabatimooday isticmaalkeeda aawadeed.
Cabdullaahi Muuse Axmed waxa uu hoggaamiyaa urur aan dowli aheyn oo ka shaqeeya ladagaalanka Muqaadaraadka.
“ Tobaakada saameynteeda waa mid aad iyo aad u ballaaran waxaa la sheegaa in sanad walba ay u geeriyoodaan cudurro ka yimid Tubaakada”.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa in aysan waxba ka qaban la dagaalanka Muqaadaraadka oo lagu iibiyo suuqyadda ugu waaweyn Wadanka, waxaana wasaaraddaha eedeynta ay ku dhaceyso ka mid ah wasaaradada caafimaadka, Dr Maxamd Cusmaan Maxamed oo ka tirsan wasaaradda ayaan weydiinay Waxa loo xakameyn la’yahay isticmaalka Maan dooriyaha Tubakadda.
“Wasaaradda caafimaadka waxay u xil saarantahay ilaalinta caafimaadka waddanka oo dhan, waxaa jira heshiis aduunka oo dhan ay wada saxiixaan Soomaaliyana waxaa ay ka mid tahay dowlado faro ku tiris ah oo aan saxiixin heshiiskaas”.
Si looga fogaado qatarta Tubaakadu waxa ay u baahan tahay shaqo iyo wacyigelin aad u ballaaraan taasoo lagu wajahayo dhaLlinyadaradda maalin kasta ku soo biiriyeysa balwadaan dilaaga ah.
W/D: Cali Aadan Muumin
Dhageyso: Shacabka Gedo Oo Loogu Baaqay Iney Ka Qeybqaataan Dagaallada Ka Dhanka Ah Al-shabaab
Ciidanka Dowladda Iyo Kuwa AMISOM Oo Dib Ula Wareegay Deegaanka Moqokori, Hiiraan
Kaydka Goobjoog Select Month June 2021 (55) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Join 455,408 other subscribers